ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Pregnyl Buy - ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း
Pregnyl ® 5000 IU သည်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း 3,000.00 ฿ ရောင်းချခြင်း
Pregnyl ဆေးထိုးဘို့အဖြေရှင်းချက်များအတွက် 5000 IUpowder ®။
ပုပ်၏တက်ကြွသောပစ္စည်းဥစ္စာ human chorionic gonadotropin ဖြစ်ပါသည်,
Pregnil, အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်လိင်ဂလင်းအတွက် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလှုံ့ဆျော
လူ့ luteinizing ဟော်မုန်း (LH) ၏ဝိသေသ။
အထီးလူနာများတွင် pregnil testosterone ဟော်မုန်းများ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် human chorionic gonadotropin ဆန့်ကျင်ပဋိ၏အသွင်အပြင် pregnil ၏နိဒါန်းနှင့်အတူစောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပါဘူး။
အမျိုးသမီးတွေသွေးပလာစမာထဲမှာ human chorionic gonadotropin (hCG) ၏အများဆုံးစူးစိုက်မှု, 20 နာရီအကြာတွင်ဆုံးဖြတ်
အမျိုးသားများတွင် -6နာရီအကြာတွင် (ဆေးထိုးပြီးနောက်, intramuscularly တစ်ချိန်က) ။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် pharmacokinetics အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုအဓိကအားဖြင့်အရေပြားအောက်ဆုံးအဆီ သာ. အထူကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း
ယင်းတင်ပါးတွင်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖိုင်ဘာ။ အသားထိုးဆေးပြီးနောက် hCG ကိုအသွေးကောင်းကောင်းသို့စုပ်ယူသည်။
ယိုယွင်းမှု၏ထက်ဝက်-ဘဝ 33 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80% ကျောက်ကပ်တစ်ရှူးပျက်စီးနေသည်။ ပပျောက်ရေးနေ့ - ဆီးနှင့်အတူ။
• idiopathic dissolutility နှင့်ဆက်စပ်မျိုးဆက်ပွားစွမ်းရည်အတွက်ကျဆင်းခြင်း,
• pituitary ဆဲလ် gonadotropic function ကို၏မရှိခြင်းကြောင့်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှောင့်နှေး;
• (ကြောင့်ခန္ဓာဗေဒ occlusive မှလွဲပြီး) cryptorchidism ။
ထိန်းချုပ်ထားသားအိမ် hyperstimulation ညွှန်ကြားပေးဘို့အပေါက်များအတွက် follicles ပြင်ဆင်ထားရန်အေအာရ်တီဆေးအစီအစဉ်များအတွက်• (ကူညီမျိုးပွားနည်းပညာ);
•ချို့ယွင်း follicular ရငျ့သို့မဟုတ် anovulation နှင့်ဆက်စပ်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်အတူမျိုးဥထွက်၏ induction;
•အမျိုးသမီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းအတွက်မျိုးဥထွက်လှုံ့ဆော်ဖို့အတှကျ gonadotropin-releasing ဟော်မုန်း Analogues သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် တွဲဖက်. (Assistant မျိုးဆက်ပွားနည်းပညာများနှင့်အတူထိန်းချုပ်ထားသားအိမ် hyperstimulation ၏ထိုအချိန်ကအပါအဝင်) ကိုရာသီစက်ဝန်း၏ luteal အဆင့်များအတွက်ထောက်ခံမှုကြောင့်အီစရိုဂျင်၏မလုံလောက်လှုပ်ရှားမှုမှ anovulation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ သားဥအိမ်၏ပထမအုပ်စုမလုံလောက်) - WHO ကခွဲခြားအဆိုအရ endogenous မူရင်း။
အဆိုပါ decolour ၏ lyophilized တက်ကြွစွာပစ္စည်းဥစ္စာသို့မိတ်ဆက်စကားမတိုင်မီကပူးတွဲပါအရည်ပျော်ပစ္စည်းကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း intramuscularly စီမံခန့်ခွဲ။ ဖြေရှင်းချက်၏မြုံ၏ထပ်မံထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အာမခံချက်မပါကတည်းကပြင်ဆင်ထားဖြေရှင်းချက်သိုလှောင်မှုမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကားဆေးညွှန်းအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ကြသည်ကုသမှုယိုယွင်း၏နိဒါန်းမှလိုအပ်သောတုံ့ပြန်မှုပေါ် မူတည်. တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆရာဝန်အားဖြင့်ချိန်ညှိရပါမည်။
မျိုးဥထွက်၏ထိုးဖေါက်ခြင်းသို့မဟုတ် induction များအတွက် follicles ၏ပြင်ဆင်မှု: တစ်ချိန်က 3000-10 000 IU နဲ့တစ်ဦးသောက်သုံးသောနှင့်အတူထိုးသွင်း။
ရာသီစက်ဝန်း၏ luteal အဆင့်များအတွက်ပံ့ပိုးမှု: တစ်ချိန်က 1000-3000 IU နဲ့တစ်ဦးသောက်သုံးသောနေ့ဖြစ်၏။ 2-3 ထိုးစုစုပေါင်းပေးထားကြသည်: တိုင်း 1 အချိန်9နေ့ရက်ကာလ၌သန္ဓေသားတွေပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း၏ယခုအချိန်တွင်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်မျိုးဥထွက်ပြီးနောက် (ဥပမာ: မျိုးဥထွက်၏ဆွပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 3,6နှင့်9အပေါ်) ။
မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ချိုးဖောက်မှုများမှတဲ့အခါမှာအထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း, spermatogenesis spermogram များ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်တိုးတက်လာဖို့ကအနည်းဆုံး 1 လကြာ follicles-လှုံ့ဆော်ဖို့တစ်နေ့လျှင်ဟော်မုန်း2အချိန်သို့မဟုတ် 3-3 ကြိမ်တစ်ပါတ်နဲ့ပေါင်းပြီးသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး monotherapy အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး 1000-2000 IU သည်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ ရှိလျှင်မှို၏နိဒါန်းစဉ်အတွင်းကယာယီ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူအစားထိုးကုသမှုကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ယောက်ျားလေးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးနှောင့်နှေး - အနည်းဆုံး 1500 လအတွင်းမှာ - အဆိုးဆုံး6IU သည်, ကုသမှု၏သင်တန်းတစ်ခုထိုးအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး 2-3 ကြိမ်တစ်ပါတ်အုပ်ချုပ်သည်။
Cryptorchidism: အသက်2နှစ်အောက်သားသမီးတို့အဘို့, 250 IU နဲ့တစ်ဦးထိုးမှာအနည်းဆုံး2လသင်တန်းနှင့်အတူ7ရက်ပေါင်းနှုန်း6ကြိမ်ပေးထားလျက်ရှိ၏2မှစ. နှစ်ပေါင်း6မှ -2လ 7-500 IU နဲ့သင်တန်းအဘို့အ 1000 ရက်ပေါင်းနှုန်း6ကြိမ်;6နှစ်ပေါင်းထက်ပိုသားသမီးတို့အဘို့ -2နေ့ရက်ကာလ၌7ကြိမ် ME6မှ 1500 လကြာ။ မလုံလောက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အမှု၌, ကုသမှု၏သင်တန်းထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်။
•သားအိမ် hyperstimulation syndrome ရောဂါ,
•အသားဥအိမ်၏မလိုလားအပ်သော hyperstimulation ။
အဆိုပါသားဥအိမ်၏ပျော့ hyperstimulation ၏ရောဂါလက္ခဏာများ: ပျို့, ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု, ဝမ်းလျှော, ရင်ဘတ်နာကျင်မှု, အသားဥအိမ်၏အရွယ်အစားအတွက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်တိုး, ဒါမှမဟုတ်သားအိမ် cyst ၏အသွင်အပြင်။ ပြင်းထန်သားအိမ် hyperstimulation ၏ရောဂါလက္ခဏာများ: အ (rupture တစ်ဦးစိတ်သဘောထားရှိသည်) ကိုသိသိသာသာသားအိမ် cyst ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကိုယ်အလေးချိန်, ascites ၏အသွင်အပြင်, thromboembolic ပြဿနာများနှင့် hydrothorax ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။
အထီး: ကြောင့်တိုးလာအန်ဒရိုဂျင်ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆီးကျိတ်တစ်ရှူး, gynecomastia, စိုက်ထူခြင်းနှင့်သွေးထဲမှာတိုးလာ testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုကြောင့်လိင်တံပျတိုးအတွက်တီထွင်ခဲ့တယ်အပြောင်းအလဲများသည်နို့သီးခေါငျး၏ hypersensitivity, အ inguinal တူးမြောင်းအတွင်းဝှေးအတွက်သေးငယ်တဲ့တိုး, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အရည်များနှင့်ဆိုဒီယမ် retention ကို အပျိုဖော်ဝင်စရဲ့ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကို Characteristic အပြောင်းအလဲများကို။
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်: ကြောင့်ပုပ်၏ဇီဝဇာစ်မြစ် (နာကျင်မှု, ပိတ်ဆို့မှုကို, ကွိတျ, ယားယံခြင်း, ရောင်ရမ်းခြင်း) ကိုထိုးဆိုက်သည်မှာနှောင့်အယှက်ရှိပေမည်။ Hypersensitivity တုံ့ပြန်မှု (အဖျား, အဖု) လည်းဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။
• Adrogen-မှီခိုမြင်းသရိုက်ပုံ (ယောက်ျားအတွက်သံသယရှိသူသို့မဟုတ်ထူထောင်ရင်သားကင်ဆာ, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ);
•တည်းကကုသမှုမရှိဘူး endocrine ရောဂါများ (adrenal function ကို၏မလုံလောက်, hypothyroidism, hyperprolactinemia);
•အ fallopian ပြွန်၏အဆီးအတားနဲ့ဆက်စပ်အမျိုးသမီးများ၏မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း,
•ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်မှို၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမဆို gonadotropic မှမတည့်တုံ့ပြန်မှု။
Pregnil ကိုယ်ဝန်အတွက် contraindicated သည်မဟုတ်, ထိုရာသီစက်ဝန်း၏ luteal အဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သတ်မှတ်ထားသည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သူနာပြုမိခင်များမှမူးယစ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
human chorionic gonadotropin အလွန်နိမ့်အဆိပ်အတောက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ parenteral အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူစူးရှအလွန်အကျွံသုံးစွဲလက္ခဏာတွေဖော်ပြထားကြသည်မဟုတ်။ ပုပ်၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲနေတဲ့နောက်ခံဆန့်ကျင်အမျိုးသမီးတွေမှာတော့သားအိမ် hyperstimulation ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ပြဿနာများ၏ Form ကို:
1500 IU နဲ့တစ်ဦး ampoule အတွက်ဆေးထိုးဖြေရှင်းချက်၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့အ Lyophilized အမှုန့်; 5000 IU သည်။ အဆိုပါကိရိယာအစုံဟာအရည်ပျော်ပစ္စည်းပါဝင်သည်။ တစ်ဦးစက္ဏူထူ box ထဲမှာ,3ampoules တစ်ဦးပုံ squamous အထုပ်ထဲမှာပုပ်ဖြစ်ကြသည်။
Pregnal2နှစ်ပေါင်းထက်မပို 15-3 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်မှာမိုက်သောအခြေအနေများအတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းသတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်အခြေအနေများကိုစောင့်ရှောက်မည်။
active ပစ္စည်း: chorionic gonadotropin ။
auxiliary ပါဝင်ပစ္စည်းများ: mannitol, ဆိုဒီယမ် dihydrophosphate anhydrous, ဆိုဒီယမ် hydrophosphate anhydrous, ဆိုဒီယမ် carboxymethylcellulose ။
ဟော်မုန်း, သူတို့ရဲ့ analog နဲ့ anti-ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ
အမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဒြပ် Analogues အပေါ်အခြေခံပြီးဆေးဝါးများ
human chorionic gonadotropin အားဖြင့်မျိုးဥထွက်၏ induction နှင့်အတူမျိုးစုံကိုယ်ဝန်တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ကူညီမျိုးပွားမှုနည်းပညာများ, ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတိုး၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အမှု၌။ တုဗလ patency ချိုးဖောက်မှုများ၏လက္ခဏာများရှိပါသည်လျှင် - ectopic (ectopic) ကိုယ်ဝန်အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, ကိုယ်ဝန်စတင်ခြင်းပြီးနောက်, သန္ဓေသားဥများသားအိမ်တည်နေရာသားအိမ်၏ ultrasound စာမေးပွဲကအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းဆေးဝါးများမီ, Non-ပုံမှန်အစည်းအဝေးမူရင်းထိန်းအကွပ်မဲ့ endocrinopathies (ထိုသိုင်းရွိုက်ဂလင်း, pituitary gland သို့မဟုတ် adrenal ဂလင်း၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု) ဖယ်ထုတ်လိုက်ရပါမည်။
ကြောင့်ချို့ယွင်း follicular ရငျ့သို့မဟုတ် anovulation မှမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီး Pregnil follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း၏ concomitant အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူမလိုလားအပ်သောသားအိမ် hyperstimulation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ဤအမှုကိစ္စများတွင်, (ပုံမှန်ကြားကာလမှာ) မီနှင့်ကုထုံးကာလအတွင်း ultrasound စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့် follicles ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာအစအခါအားလျော်စွာထိုအသွေးကိုသွေးရည်ကြည်အတွက် estradiol များ၏ content ဆုံးဖြတ်ရန်အကြံပြုသည်။ estradiol အတွက်လျင်မြန်စွာတိုး (2-2 နေ့ရက်ကာလအဘို့ 3-ခွံ) follicles ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးညွှန်ပြလိမ့်မည်။ အဆိုပါသားဥအိမ်၏မလိုချင်တဲ့ hyperstimulation ဟာသားဥအိမ်၏ ultrasound စာမေးပွဲကအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါသားအိမ် hyperstimulation syndrome ရောဂါနှင့်မျိုးစုံမျိုးဥထွက်၏ induction ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုရှိကတည်းကရောဂါ၏အတည်ပြုချက်ကို၏အမှု၌, ကခကျြခငျြး follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းဆံ့ကြောင်းရန်ပုံငွေ၏နိဒါန်းရပ်တန့်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်မှု multifollicular သားဥအိမ်နှင့်အတူလူနာကုသရန်ယူရပါမည်။
human chorionic gonadotropin များ၏နိဒါန်းအန်ဒရိုဂျင်၏ပေါင်းစပ်တစ်ခုတိုးလာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါပြင်းထန်သို့မဟုတ်ငုပ်လျှိုးနေနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာမလုံလောက်, (ထို anamnesis အတွက်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်အပါအဝင်) ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်, သွေးတိုးရောဂါ, ချို့ယွင်းကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကို, ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူအထွေထွေအခြေအနေသို့မဟုတ် relapse အတွက်ယိုယွင်းပျက်စီးလာရှိစေခြင်းငှါ ။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့, မူးယစ်ဆေးအနီးကပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်မှာသတိနဲ့အုပ်ချုပ်သည်။
အချိန်မတန်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းလူပျိုတို့အတွက် ripening epiphyseal တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကာလအတွင်းသတိထားသူတို့နှင့်အတူသတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပုပ်၏နိဒါန်းဟာ musculoskeletal စနစ်၏ပြည်နယ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။